पत्रकार सम्मेलनमा 'होली वाइन' देखि बुद्धिजीवीलाई 'थला पार्ने' प्रसङ्ग (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पत्रकार सम्मेलनमा 'होली वाइन' देखि बुद्धिजीवीलाई 'थला पार्ने' प्रसङ्ग (भिडियो)
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले सुरुमा निर्णयहरू सुनाए। त्यसपछिको खुला सत्रमा सवाल-जवाफको केन्द्र बन्यो-एसिया प्यासिफिक सम्मेलन।
पत्रकारका प्रश्न र प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका जवाफ समेटिएका केही रोचक अंशहरू तलको भिडियोमा उतारिएको छ।
मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारविरुद्ध मिडियाको आक्रामक रवैयाबारे क्रोधमिश्रित प्रतिकृया दिएका छन्। उनले मिडिया दलीय आग्रहका आधारमा सरकारबिरुद्ध होमिएको आरोप लगाए। मिडियाले संसद्मा उभिएर जवाफ दिनु परेको अन्तराष्ट्रिय प्रसङ्ग उठाउँदै उनले नेपालका मिडियालाई आफ्ना समाचार सामग्रीबारे जवाफदेही बन्न सचेत गराए।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिताको बचाउ गर्दा उनले त्यहाँ अरूले 'होली वाइन' खाएपनि प्रधानमन्त्रीले वाइन नखाएको दावी गरे।
बुद्धिजीवीलाई प्रधानमन्त्रीले 'धम्की दिएको' प्रशंगबारे प्रश्नको जवाफमा उनले खुल्ला बहसका लागि प्रधानमन्त्रीले आव्हान गरेको तर 'थला पारिदिने' आशय धम्कीपूर्ण नरहेको जिकिर गरे।
निर्मला हत्या प्रकरण, सरकारको विरोध, मिडिया र बुद्धिजीवीको सरकारमाथि लगातारको आक्रमण र पार्टीकै नेताहरूले सरकार र प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका प्रसङ्गमा प्रश्नोत्तर चलेको थियो।